Waa maxay Kufriga iyo Shirkigu? | Doodwadaag waa Danwadaag.
Quraanku habab badan buu isu fasiraa sida in aayad lagu fasiro aayad kale ama in la isku fasiro laba kelimo, waana sababta keenta in aayaduhu soo noqnoqdaan, maxaa yeelay hadalku inuu soo noqnoqdo waa nuqsaan hadayna jirin sabab loo soo celiyo.
Matalan aayadda alle yiri; ” waxay oranayaan wacdigu (ballantu ama qiyaamuhu) waa goorma hadaad run sheegaysaan/ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين”, waxay soo noqotay 7jeer oo hal mar oo ka mida erayga “al-wacdi” lagu bedeley “al-fatxi” oo macnihiisu yahay “furasho ama guul”, aayadani su’aal bay ahayd sidaa darteed waxaa loo soo celceliyey inay ka dhalanayaan 7jawaab oo kala duwan, in meeshii “al-wacdi” ahayd lagu bedeley “al-fatxina” waxaa u sababa inay yihiin 2kalimo is fasiraya si hadi mid ka mida la garan waayo kan kale loo fahmo.
Sidoo kale Kufriga iyo shirkigu waa isku macne sida laga fahmayo aayadda 8aad iyo tan 9aad ee suuradda al-saf ee alle yiri; “alle wuu taam yeelin nuurkiisa haba karheen kaafiriintu … si uu uga kor mariyo diin oo dhan haba karheen mushrikiintu/ والله متمّ نوره ولو كره الكافرون … ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون”, maxaa yeelay erayga shirki wuxuu galay booska erayga kufri si laguu tuso inay isku macne yihiin.
Kufrigana waxaa laga wadaa dulmi sida laga fahmayo aayadaha 44-45 ee suuradda al-maa’ida ee alle yiri; “ciddii aan wax ku xugmin wixi alle soo dejiyey kuwaasi waa kaafiriin, ciddii aan wax ku xukumin wixi alle soo dejiyey kuwaasi waa daalimiin /ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الالكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون”, maxaa yeelay erayga dulmi wuxuu galay booska erayga kufri sidaa darteed kufri waa wixi denbi ah mid yar iyo mid waynba. Sidoo kale shirkigu waa nooc ka mida dulmiga sida alle yiri; “shirkigu waa dulmi wayn/إن الشرك لظلم عظيم”, 13 luqmaan, sidaa darteed shirkigu waa nooc ka mida kufriga (dulmiga).
Wixi la wada leeyahay in la wadaago waa xaq sida dadka isku darsada maalka, wixi qof gooni u leeyahay in lala wadaago isaga oo aan idminna waa dulmi sidaa darteed shirkiga denbiga ahi waa midka ku dhisan dulmiga. Sidaa darted kufri waa wixi denbi ah mid yar iyo mid waynba, taasoo ka dhigan in iimaankuna noqonayo wax kasta oo wanaaga ama caddaalad ku dhisan sidaa darteed qofkasta oo dulmi sameeya wuxu ku dhacay wax ka mida kufriga, qof kasta oo wanaag sameeyana wuxuu sameeyey wax ka mida iimaanka hadi uu yahay qof muslin sheegta iyo hadi kaleba..
Wuxuuna kufrigu noqon karaa hadal sida inuu qofku yiraahdo 3ilaah ayaa jira, maxaa yeelay aduunkan alle keilya ayaa abuuray sidaa darteed cid kale oo la leh ma jirto. Waxaa kale oo kufrigu noqon karaa ficil sida in naf la jaro ama xubin la gooyo ama maal la qaado, qof kasta oo ku dhaca mid ka mida sadexdaa denbina waxay ciqaabtiisu noqon wax u dhigma waxa uu sameeyey hadi uu si cad u sameeyey iyo hadi uu si qarsoodi ah u sameeyeyba sida alle yiri; “xumaanta waxaa lagu gudaa mid la mida/وجزاء سيئة سيئة مثلها”, 40 al-shuraa, taasoo ka dhigan in denbi kasta oo qof galo oo la xukumayo ay shardi tahay in la garanayo inta uu le’eg yahay si aan loogu xukumin wax ka badan wixii uu gaystey.
Matalan hadi nin qaali ahi uu qof lagu lahaa 1000$ ku xugumo 2000$ lama oranayo qaaligu gaalnimo ayuu ku dhacay ee ha la dilo ee kunkii siyaadada ahaa ayaa loo celinayaa qofkii la dulmiyey, maxaa yeelay in qofka la yiraahdo gaalnimo ayuu ku dhacay iyadoon la caddayn nooca gaalnimadu tahay iyo inta ay le’eg tahay waxaa ka dhalanaya in la rido xugun aan caddayn sidaa darteed kii gaalnimada la dagaalamayey ayaa galnimo ku dhici kara hadi uu rido xukun dulmi ku dhisan.
Qore: Cabdalle M. Aw-xasan